Wasiirka Arrimaha Gudaha & Dowladaha Hoose ee DG Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo wareysi gaar ah siiyay Axadle ayaa ka hadlay Arrimaha Doorashooyinka maamulkaas, Duruufaha Amni, Xaaladda go’doonka ee Degmooyinka Hir-Shabeelle, Dagaal beeleedyada iyo qodobo kale.
“Muddo 8 ilaa 6 bilood waddada waa ay xasilooneed, isu socodka waa uu wanaagsanaa, saldhigyo toos ah Nabad-diidku kuma lahan jidka, balse waa argagixiso, iyaga oo socda ayay imaanayaan, weerar ayay geysanayaan, Ciidamo Militari ah oo dhowr tallaabo isu jiro & kuwa AMISOM ayaa waddada saldhigyo ku leh” Sidaasi waxaa Axadle u sheegay Wasiir Caadle.
“Jowhar oo Muqdisho u jirta 90-KM ayaa qalabka Dhismaha looga qaadaa, Dhagaxa, Carrada, Shamiitada, Musmaarka iyo wax waliba oo agab ah Xamar ayaa laga qaadaa, waxaa la gubay Gaadiid, Ganacsatada ayaa u baqday Gaadiidkooda oo ka cabsanaya in la gubo, Halka kaariko ee carro masjid lagu dhisayo ah waxaa ku baxda $1000 (Kun Doollar)” ayuu sii raaciyay Wasiir Caadle.
Caqabadaha amni darro ayaa haatan u muuqata in ay gudaha u gashay Magaalada Jowhar oo xarunta DG Hir-Shabeelle ah, muddo bil waxaa lagu dilay labo Wasiir oo sidoo kale ahaa Xildhibaanno katirsan Baarlamaanka.
Hir-Shabeelle ayaa isu diyaarineysa qabashada doorashada Dastuuriga ee Afartii sanaba mar la qabto, waxaana socda abaabulka lagu kala dirayo Xildhibaannada si ay dib ugu laabtaan deegaan Doorashadooda, loona helo Baarlamaanka labaad ee Maamulkaas.
Halkaan Guji si aad u daawatid Wareysiga oo Dhameystiran.